ရတနာပုံမိဖုရား (ပင်းယ) - ဝီကီပီးဒီးယား
အခြား ဆင်တူအမည်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက်၊ ရတနာပုံ ကို ကြည့်ပါ။
ပင်းယ မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
ပင်လယ် မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
၁၃၀၀ ဆယ်စုနှစ် – ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၁၃
c. ၁၂၈၀ ဆယ်စုနှစ်
ရတနာပုံ သည် ပင်းယနေဘုရင် တစ်စီးရှင် သီဟသူ၏ မိဖုရားနှစ်ပါးအနက် တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ သူမသည် စစ်ကိုင်းဘုရင်များဖြစ်သော အသင်္ခယာ စောယွန်းနှင့် တရဖျားကြီးတို့၏ မယ်တော် ဖြစ်သည်။
ရတနာပုံ မိဖုရားသည် မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်နေရာရှိ လင်းယဉ်ရွာမှ သာမန်အရပ်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည် ရှမ်းလူမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်ဟန်တူသည်။[note ၁] ၁၂၉၈ ခုနှစ်တွင် သူမသည် ၁ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှင့် မုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်ကာ တောင်အရပ်သို့ ခရီးထွက်စဉ် အမဲလိုက်ထွက်လာသော သီဟသူနှင့် တွေ့ခဲ့သည်။ အစ်ကိုနှစ်ဦးနှင့်အတူ မြင်စိုင်းနေပြည်တော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ သီဟသူက ရတနာပုံအား ကိုယ်လုပ်တော်အဖြစ် ကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် ပထမဆုံးသားတော် စောယွန်းကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ သမီးတော် စောပုလဲအား မမွေးဖွားမီအထိ သူမသည် ကိုယ်လုပ်တော်အဖြစ်သာ ရှိနေခဲ့သည်။ ယင်းနောက် သူမအား မြောက်နန်းမတော် မိဖုရားအဖြစ် မြှောက်စားခဲ့သည်။
မိဖုရားမှ ဆင်းသက်လာသူများတွင် စစ်ကိုင်းဘုရင်များဖြစ်သော အသင်္ခယာ စောယွန်းမှ တရဖျားငယ်တို့အထိ ပါဝင်သလို အင်းဝနေပြည်တော်အား တည်ထောင်ခဲ့သူ သတိုးမင်းဖျားဘုရင်လည်း ပါဝင်သည်။[note ၂] ထို့အပြင် မိဖုရားခေါင်များဖြစ်သော အင်းဝ ရှင်ဘို့မယ်နှင့် ရှင်မြတ်လှ တို့သည်လည်း ရတနာပုံမိဖုရား၏ အဆက်အနွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။
↑ ရာဇဝင်ကျမ်းများ (မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၃၇၁–၃၇၂)က သူမ၏ မျိုးရိုးကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ မြောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်သည်ဟုသာ ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ပညာရှင်များက သူမအား ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအဖြစ် ရည်ညွှန်းဖော်ပြကြသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် (Phayre 1967: 59–60) နှင့် (Harvey 1925: 75–81) တို့တွင် ကြည့်နိုင်သည်။
↑ See the regnal list of Sagaing in (Harvey 1925: 366).
↑ ၁.၀ ၁.၁ မှန်နန်း အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၃၊ စာ ၃၇၁–၃၇၂
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝင်သမိုင်းကော်မရှင် (၁၈၃၂)။ မှန်နန်းရာဇဝင်။ ၁–၃ (၂၀၀၃ ed.)။ ရန်ကုန်: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန။
မွေးဖွား c. ၁၂၈၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန် ?
ဘွဲ့အသစ် ပင်းယ မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
ဘွဲ့အသစ် ပင်လယ် မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
၁၃၀၀ ဆယ်စုနှစ်–၁၃၁၃ မရှိ
စောဦး၊ (မသိရှိရ)၊ နှင့် မိစောဦး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရတနာပုံမိဖုရား_(ပင်းယ)&oldid=721915" မှ ရယူရန်
၁၃ ရာစု မြန်မာ အမျိုးသမီးများ
၁၄ ရာစု မြန်မာ အမျိုးသမီးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။